Global Manufacturing Technology - Qunfeng tsaina fitaovana Co., Ltd.
Global Manufacturing Teknolojia
6 ambony fototra orinasa mpamokatra entana teknolojia / Delicate fametrahana mazava tsara / Zero kilema
Qunfeng dia nahay ny orinasa mpamokatra entana fototra teknolojia izay manokana ho an'ny fananganana ny toetra tsara indrindra-tsaina milina fanaovana gorodona. Noho izany, vonona ny mandeha ho azy tanteraka hafanana fitsaboana pamokarana, Qunfeng no afaka mba hahazoana antoka ny herin'ny component.And tsirairay eo amin'ny 6 teknolojia, na fanapahana, na CNC fibre teknolojia, hanompo ny antoka rehetra ny farany fametrahana mazava tsara ny singa rehetra.
Qunfeng mino fa Premium toetra dia miankina amin'ny fanakianana fepetra ny tsirairay componet & dingana sy foana manenjika Tailor-nanao vokatra isaky modely amin'ny tena mandroso orinasa mpamokatra entana teknika tany an-tsaha fa isaky ny tapa-damba shoud manaraka ny hentitra fepetra arahana ny firenena fitsipika ary koa ISO9001 kalitaon'ny rafitra.
Fibre fanapahana milina
Qunfeng dia mba ho mampihatra ny fanapahana fibre-dehibe ny teknolojia ho any amin'ny orinasa mpamokatra entana ny singa sy nanam-mpitarika orinasa parts.The Ultra-avo tamin'ny laser fametrahana mazava tsara fanapahana dia manampy miantoka smoothest ambonin'ny sy manamaivana deformation. Tsy toy ny mahazatra ny teknolojia fanapahana, fanapahana tamin'ny laser miasa tsara kokoa ny fametrahana mazava tsara ao amin'ny fanajana sy ny fiarovana ny componets.
Welding milina dia voafidy hisolo boky welding ho fitoriana ny fanatsarana ny rafitra ankapobeny fampisehoana sy ny tombontsoa izany indrindra no fahamarinan-toerana - natao tsara noho ny iray boky fampianarana, tsy reraka, lehibe miasa toerana, ambony fahombiazana sy ny fahaiza-miasa rehetra izay tonga mba hahazoana antoka ny manam-toetra sy ny fahamarinan-toerana ny milina.
High marina tsara gantry mihaohao milina
Qunfeng mafy Mandinika tsara fa avo-fametrahana mazava tsara gantry mihaohao milina dia applied.There dia Ultra-avo tanteraka fametrahana mazava tsara ho an'ireo ampiasaina fa azo lazaina fa "Naripaka daholo ny sarangan'olona fahatanterahana" dia inona fotsiny izany.
nitifitra vary main'ny rivotra sy sandblasting
alalan'ny fanapoahana mandroso ny teknolojia, vy tifitra dia nalaza amin'ny hafainganam-pandeha avo fa manohitra ny ambonin'ny mba nampalama raha mbola fasika ho roughen.Combining nitifitra vary main'ny rivotra sy sandblasting, ambonin'ny azôty loto sy kirany no amim-pahombiazana dia nifindra ka reraka hery miavaka kokoa.
CNC foibe fikarakarana manana ny tombony ny fahamarinan-toerana avo, avo sy ny fametrahana mazava tsara repeatability sns avo sy mazava tsara QunFeng efa nandany CNC fanodinana mba hahazoana goavana famokarana Mandritra izany fotoana izany toetra ambony foana.
Tanteraka Automatic Heat Fitsaboana
Mba creat ny tsara indrindra andian-tsoratra milina, Qunfeng no nitarika tamin'ny fampidirana ny tena mandeha ho azy hafanana fitsaboana rafitra any an-tsaha, izay ihany koa iray amin'ireo malaza manararaotra Qunfeng, sy mampitaha ny hafa teknolojia, hafanana fitsaboana mety tena manatsara ny hery sy ny diso mikasika ny Fahasarotana ny vy, dia be hanitatra ny androm-piainany ny milina sy ny bobongolo tsy misy ny fanovana ny endrika sy ny zavatra simika ny vy workpieces.